Otu batrị OnePlus 6 na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Batrị, Mobiles, OnePlus
Ọ bụrụ na izu ole na ole gara aga, ọ bụ nsogbu na bootloader, ugbu a obu uzo nsogbu ohuru na OnePlus 6. Ọdịdị dị elu nke akara ndị China emeela ka OxygenOS 5.1.8 gbanwee ụbọchị ndị a. Nke a bụ ụdị ọhụụ nke oyi akwa maka ụdị ụlọ ọrụ ahụ. Mana ọ dị ka mmelite ahụ anaghị adị mma na njedebe dị elu. Ebe ọ bụ na enwere nsogbu na batrị gị.
Ndị ọrụ nwere OnePlus 6 ndị kwalitela na OxygenOS 5.1.8 na-enwe nsogbu iwe. Ma ọ bụ na batrị nke ngwaọrụ ahụ na-agba ọsọ karịa ngwa ngwa. Ihe na-eme mgbe ị natara mmelite ahụ.
Akụkụ dị mma bụ Ọ dị ka nke a abụghị ọdịda na-emetụta ndị ọrụ niile nwere njedebe dị elu. Mana enwere ọtụtụ ndị ọrụ ndị njehie a metụtara. Ha niile amalitela ịta ahụhụ site na nsogbu ahụ mgbe emelite ahụ.
E nwere ọtụtụ ihe omimi na nke a. Nsogbu doro anya, Igwe batrị OnePlus 6 na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ọ na-agbada ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ. Ihe nke mere ka enwee nchekasị na iwe n'etiti ndị ọrụ nwere oke njedebe nke akara ndị China.
Ugbu a ika ahụ azaghị ebubo ndị a. Ọ bụ ezie na ha bụ ezigbo ebubo, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ndị ọrụ nwere OnePlus 6 metụtara ya. Mana anyị nwere olile anya na ha ga-ekwu ihe ụfọdụ ma kweta ọdịda ya ngwa ngwa. Ọ gaghị ewe ogologo oge ịmụtakwu ihe.
Ka ọ dịgodị, gịnịChere ka ewepụtara onye ọrụ nwere OnePlus 6 nke ọdịda ahụ emetụtala. N'oge a kpọmkwem ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ndị batrị a na-emetụta ngwa ngwa amabeghị, mana ọ ga - ekwe omume na ọ ga - abawanye karịa karịa ụbọchị ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Mmelite kachasị ọhụrụ na-enye nsogbu batrị na OnePlus 6
Na mgbakwunye na nbudata ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa na mbụ, ọ na-akawanye nnọọ na-ekpo ọkụ ma na Nchaji usoro na mgbe ọ na-eji ruo ogologo oge na ihuenyo na-arụ ọrụ.
Luiz T. dijo
Nyaahụ m emelitere na Android 10 na Oxigen OS 10.3.0 nke Otu m tinyere 6 na batrị na-ekpo ọkụ ma mechaa 60% ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ. Biko nyere gị aka ịgbanwe mmelite ahụ. Daalụ
Zaghachi Luis T.